Ku xiridda ArcGIS Google Earth - Geofumadas
Nofeembar, 2007 ArcGIS-ESRI, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, dalwaddii Earth
Waxaan ka wada hadalnay sida loo gaaro tan ka hor xiriir Manifold oo leh Google Earth iyo globes kale oo farsamo ah, haddaba aan aragno sida loo sameeyo ArcGIS.
Waqti ka hor dad badani waxay moodayaan in ESRI ay tahay in ay hirgaliso kordhinta noocan ah, maahan oo keliya in ay lacagtu haysato laakiin sidoo kale waa in ay yihiin baahiyaha dareeme ee adeegsadayaasha. Qaar baa u soo muuqday download imagesIn ay howlgal ma aha sharci ah Google, iyo kuwo kale oo la mid ah maanta in aynu ka hadalno oo ka mid ah sifooyinka iyo is-dhexgalka la ArcGIS waa weyn, laakiin ka tago noo fekerayo oo jidka keenaysaa ESRI arrintan la xiriira.
Sii kordhinta u oggolaanaysa ArcGIS in ay ku xiranto globes virtual Arc2Earthversion 1 The dhowr maalmood ka hor uu ka tagay, inkastoo untilidades ka weyn waxay ahaayeen in awoodda si ay u abuuraan content KML geliyaan hab fudud oo soo jiidasho leh si ay Google Earth, hadda qaadataa xoog weyn si loo gaaro is-dhexgalka labada dhinac, si ay u awoodaan si ay u dajiyaan ma aha oo kaliya layers KML, laakiin sawirrada Google Earth, Dhulka Waalidiinta, Yahoomaps iyo Askar.
Ma ahan kuwa xun ee isticmaaleyaasha ESRI maalmaha aan la dagaallanno mawduucaan, maaddaama ay sifooyinkaasi yihiin kuwo aad u xoogan oo badanaa sababtoo ah waxay kudhexaadineysaa sida fiditaanka Arcmap
Waxa aad dhoofin karto
Macluumaadka sawir sida muraayadaha sawirada
Ikhtiyaarka ah in la dhoofiyo lakabyo kala duwan ama dukumiinti la xiriira
Hababka cusub, kml, kmz, geoRSS (fudud), GeoRSS (GML), GeoJson
Waxaad awood u yeelan kartaa inaad dhoofiso dhoofinta adigoo dejinaya habka loo yaqaan 'destination folders' ama urls
Waxaad ku dari kartaa faallooyin ama daabacaad ku saabsan waxyaabaha la abuuray
Taageero loogu talagalay Kml 2.2
Warqad la midaysan
Faylasha kml, kmz, geoRSS (fudud), GeoRSS (GML), AtomPub
Waxaad ka soo rogi kartaa lakabka kml oo ka soo url caan ah
Waxaad soo dejin kartaa faylka kml ama midka oo dhan
Soo-dejinta moodooyinka DTM waxay ku salaysan yihiin saldhig
Ku dar, cusbooneysii ama tirtirto lakabadaha la soo dhoofiyay sida muuqaalkoodu yahay, for Geodatabase shakhsi ama lagu kaydiyaa SDE
Qaar ka mid ah xogahan waxaa lagu dhoofin karaa qaabka miyir-qabadka
Wargeysku waa bixinayaa ku noqo adduunka geospatial by news ah version 2, inkastoo ay jiraan shaki qaar ka mid ah habka:
Inkastoo nidaamka weydiiyo oo kaliya ArcGIS 9.0 +, Windows iyo qaabka .net 2000 1.1, qalabka ama gelinno core dual 64 dammaanad in aad mashiinka ma soo deldeli doonaa in ifinito marka aad la xaddi badan oo data shaqeeya.
ARRIMAADKA MACLUUMAADKA V2 - $ 2 USD
CAD2Earth Enterprise V2 - $ 2500 USD
Se waad soo dejisan kartaa nuqul tijaabo ah oo ah maalmo 7 ah oo dhoofiya xayiraadaha 500 ee lakabka, iyo 50 ee soo dejinta
Kuwa haysta noocyada 1, qiimaha cusbooneysiinta kharashka 40% ka yar, (ilaa Diisambar 2007)
Waxaa sidoo kale jira qiimaha kale hoose ee waxbarashada ama kuwa aan ganacsiga ahayn
Waxay bixiyaan shuruudaha 90 maalmo, haddii aadan ku qanacsaneyn caddeynta lagu siiyay lacagta
Qaar ka mid ah waxyaabahan ayaa ka dhigaya kala cayncayn ah, qiimo isku mid ah ... inkastoo ay mudan tahay horayba u maalgelisay lacago badan oo ah lacagaha ESRI.
Weli waxaa jira kuwa ku doodaya in Google uusan dooneynin in uu u hoggaansamo xaqa isticmaalka adeegyadeeda ... sababtoo ah ma uusan galin API-ga ...
Ma cadda cidda ay iibinayaan, buug-yarahaan waxay sheeganayaan in ay ku dhow yihiin walaalaha Google, qaar kalena waxay calaamad u yihiin ESRI mid ka mid ah alaabteeda.
Qaabka kml wali waa xaddidan kuwa innaga mid ah oo loo adeegsaday in lagu arko khariidado "qurux badan", maxaa yeelay si loo bilaabo waxay kaliya taageertaa saadaasha, markaa qaababka khadka lama arki karo, qaababka aad u dhameystiran ayaa waalan ama isku-darka ...
Sidaas daraadeed xitaa haddii aan khariidadaheena ka dhigno sifooyin tayo sare leh, ugu dambayntii waxaa la geeynayaa qalab baaritaan iyo qalad qalad ah.
Maxay naga dhigeysaa inaan xaddideyno haddii ay tahay mid u qalma in la maalgeliyo dheeraad ah in ESRI ay suurtagal tahay in ay ku fekereyso bixinta bilaashka, miyaad ku fikireysaa?
Waxaa jira qalabyo kale oo sameeya hawlo isku mid ah:
mapserver - Haddii aad jeceshahay mid aad u adag.
KmlCatalog - Wanaag fiican, ma qaadaneyso ArcGIS.
Dusha sarreeya - Naqshadaynta naqshadeynta duurjoogta, ma shaqeynayo qaybiyeyaasha.
Faytiska 2 KML - Dib loo hagaajiyo duulimaadka, waxa ay xakameysaa walxaha si qoto dheer.
Muuqaalka GPS - Laga soo bilaabo in la sameeyo bareelo
Post Previous«Previous Abaabulida Gawaarida leh AutoCAD iyo Excel
Post Next Geofumadas on duulimaadka November 2007Next »
6 Jawaab in "Ku xiridda ArcGIS Google Earth"
ArcGIS ma sameyn karto taas, iyadoo StitchMaps ay suurtagal tahay in la soo dejiyo sawirro mosaic ah iyo fayl haynta In kasta oo aan ku jirin tiff.
bandhig isagu wuxuu leeyahay:
ogaan megustaria haddii ArcGIS ama barnaamij kale lagala soo bixi karaa images dhulka google qaab tif si ma dayacno aad xal si ay u soo dejisan height ka weyn ama haddii aad dhulka google furi karaa arcgis9.3 mahad
Waxaan fahamsanahay in tani ay tahay adeegga ArcGIS 9.3, sida ku cad jadwalka qaybtan.
Waxaan jeclaan lahaa in aan galo khariidadda kartoonka Argis9.2 si Google Eart sida loo sameeyo.
Dukumiintiga Dijital ah ayaa furfuray adeegsigooda bilaash ah, inkastoo ay tahay waqti xadidan, isticmaalayaasha Mapinfo, map map iyo ESRI
Waxaan rumaysanahay in barnaamijkan aan sharci ahayn marka loo eego shuruudaha isticmaalka Google